၂၈၂၈ TCDD တွင်ခန့်အပ်ခံထားရသူများ၏အာရုံစိုက်မှုဆိုင်ရာလူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဥပဒေ RayHaber | raillynews
[24 / 01 / 2020] Ankara YHT မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုဒုတိယအကြိမ်ကြားနာမှုတွင်တရားသူကြီးထံမှအရှုပ်တော်ပုံမှတ်ချက်များ	06 တူရကီ
[24 / 01 / 2020] AKP နှင့် MHP မှ YHT Subscription Ticket Hike သို့တုံ့ပြန်မှု	06 တူရကီ
[24 / 01 / 2020] ဆမ်ဆန်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဘူတာရုံ၏တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်သည်	55 Samsun
[24 / 01 / 2020] IETT သည် ၄ ​​င်းအသုံးပြုသောရေ၏ ၄၀% ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[24 / 01 / 2020] ဘတ်စ်ကားများအတွက်ကြော်ငြာများ ၀ ယ်ရန် ESHOT လေလံများ	35 Izmir
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေဂျော့ဘ်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဥပဒေ ၂၈၂၈ မှ TCDD တွင်ခန့်အပ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု
11 / 01 / 2020 ဂျော့ဘ်, အထွေထွေ
လူမှု ၀ န်ဆောင်မှုဥပဒေအရ tcddye တွင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အာရုံစိုက်မှု
တက် 07.02.2020/XNUMX/XNUMX ယနေ့အထိတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) အခြေချကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏သမ္မတနိုင်ငံအတူတကွလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းနှင့် Separation ဌာနခွဲများ၏လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာရုံး (Haydarpasa-တူရကီ-Izmir-Sivas-Malatya နှင့် Adana Afyon) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အတူ ၎င်းတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှုများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလျှောက်ထားသင့်သည်။
1) ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့အစီရင်ခံစာ (ပြည့်စုံသောအစိုးရဆေးရုံများသို့မဟုတ်တရားဝင်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံများ) ဥပဒေအမှတ် ၂၈၂၈ အရနေရာချထားမှုရလဒ်ကြေငြာသည့် နေ့မှစ၍ ရရှိသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာများသည်တရားဝင်ရမည်။ ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာများတွင်ခန့်အပ်ခံရရန် အသေးစိတ်ခံရဖို့အသေးစိတ်;
အရောင်စစ်ဆေးရေး (ishihor စမ်းသပ်ကောက်ယူ)
2) Notary Certified ဒီပလိုမာမိတ္တူ ၂ ခု (အကယ်၍ ဒီပလိုမာမူရင်းကိုတင်ပြလျှင်ဒီပလိုမာ၏မိတ္တူကို TCDD မှတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုလိမ့်မည်။ )
3) ၂ စစ်ထုတ်လက်မှတ် (စစ်မှုထမ်းရာတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအတွက်) သို့မဟုတ်စစ်တပ်အဆင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ဆိုင်းငံ့ထားသူများအတွက်) (E-Government တရားဝင်သည်။ )
4) ဥပမာအားဖြင့်နံပါတ်2certified ရရှိထားပြီးမွေးဖွားလက်မှတ် (မူရင်းလက်မှတ်တတူ၏ TCDD အရာရှိတွေကအတည်ပြုခံရဖို့လုံလောက်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကလူဦးရေ၏မွေးဖွားလက်မှတ်တင်သွင်းရမည်။ )
5) ၂ လူမှုဖူလုံရေးဌာနရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုပျက်ပြားခြင်း (E-Government မှတစ်ဆင့်)
6-) ၁ KPDS / YDS ရလဒ်စာရွက်စာတမ်း (KPDS / YDS လိုအပ်ချက်ကို KPSS ဦး စားပေးလမ်းညွှန်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်လျှောက်ထားသူများအတွက်လိုအပ်သည်)
7) နေထိုင်ခွင့် (E-Government မှတဆင့်အခြေချခြင်းနှင့်အခြားလိပ်စာအထောက်အထားများ)
8)4ဓာတ်ပုံများ
9) ၂ ပြစ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ (E-Government တရားဝင်သည်။ )
10) 1Pcs ပလတ်စတစ်ဖိုင်၊ 2pcs ရှပ်အင်္ကျီဖိုင်
11)ပုံစံများ (အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ပုံစံများကိုနှိပ်ပါ)
a) စာချုပ် ၁ အပိုင်း (တစ်ခုတည်းစာမျက်နှာများကိုဝမ်းခွဲအဖြစ် duplex လက်ရေး output ကိုအပြီးသတ်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်)
b) အလုပ်တောင်းဆိုမှု Form ကို (တစ်ကြောင်းတည်းဖြင့်လက်ရေးဖြင့်ရေးသည်။ )
c) ကုန်ပစ္စည်းများကြေညာစာတမ်း Form ကို (တစ်ခုတည်းစာမျက်နှာများကိုဝမ်းခွဲအဖြစ် duplex လက်ရေး output ကိုအပြီးသတ်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်)
c) ပြည်သူ့အရာရှိကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒ (လက်ရေးတို့ကပြီးစီးခဲ့နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်)
TCDD တွင်ခန့်အပ်ခံထားရသောသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုTaşımacılık A.Ş.
TCDD တွင်ခန့်အပ်ခံထားရသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုTaşımacılık A.Ş.
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏လူမှုရေးန်ဆောင်မှုများဥပဒေ Assigned အလားအလာများ၏အာရုံကိုမှ
KPSS 2019-2 နေရာချထားမှုအရသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနတွင်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု
KPSS 2018-2 Preferences ကို TCDD ကျောင်းသားထားရှိ Dikkatine ရလဒ်
TCDD တာဝန်ကျတဲ့အရာရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူဥပဒေအမှတ် 2828 ၎င်းတို့၏ကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: သြဂုတ်လ91909-i ဘယ်မှာသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အက်ဥပဒေထုတ်ဝေခဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ။ (သတိပေးချက်များဥပဒေ)
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Wagon တာဝန်ပေးအပ်ပညာရှင်များ၏အာရုံကိုမှ
BURFAŞ - Bursa Park Bahçeလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ရေနှင့်ငါးမွေးမြူရေး၊
လျှောက်ထားသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအာရုံစိုလေ့ကျင့်ပေးရန် Sivas အတွက်ကျင်းပခံရဖို့စက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်
လျှောက်ထားသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုအာရုံစိုဖို့ Kars မီးရထားများတွင်ကျင်းပမည့်စက်လုပ်သမားသင်တန်းအမှတ်စဥ်
KPSS 2017 /2တာဝန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ '' အာရုံစူးစိုက်မှုအနည်ထိုင်ဖို့ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကရလဒ်များ
Channel Istanbul ဆန့်ကျင်ပဲရစ်သဘောတူညီချက်
Tekira Junction Smart Junction System သည်အသွားအလာသိပ်သည်းမှုကိုဖြေရှင်းသည်
Ankara YHT မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုဒုတိယအကြိမ်ကြားနာမှုတွင်တရားသူကြီးထံမှအရှုပ်တော်ပုံမှတ်ချက်များ
AKP နှင့် MHP မှ YHT Subscription Ticket Hike သို့တုံ့ပြန်မှု
Kuruçeşmeli Mukhtars မှကျေးဇူးတင်ပါတယ်
IETT သည် ၄ ​​င်းအသုံးပြုသောရေ၏ ၄၀% ကိုပြန်လည်အသုံးပြုသည်
ဘတ်စ်ကားများအတွက်ကြော်ငြာများ ၀ ယ်ရန် ESHOT လေလံများ
၁၁၈ CHPli Tanrıkuluမှဝေဖန်သောရုပ်သံလိုင်း
CHP သည်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောတံတားများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများသို့ထုတ်ယူရန်တောင်းဆိုသည်
TCDD သည် YHT သို့လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းလက်မှတ်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်နောက်ပြန်မလှည့်ပါ
29: ဇန်နဝါရီ 08 00 @ - 31: ဇန်နဝါရီ 17 00 @
တင်ဒါအသိပေးချက် - Malatya-inketinkaya လိုင်းပေါ်တွင်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး
29: ဇန်နဝါရီ 09 30 @ - 10: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - ခေါင်မိုးအမျိုးအစားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ (TÜDEMSAŞ)
29: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - UlukışlaBoğazköprüလိုင်း KM: 58 + 360
30: ဇန်နဝါရီ 10 30 @ - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Fiber optic cable ကိုဝယ်ဦးမည်
30: ဇန်နဝါရီ 14 00 @ - 15: 00
ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော IT ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားရန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်မသန်စွမ်းသူများနှင့်အပြစ်ရှိသူများ၏ပါးစပ်စာမေးပွဲရလဒ်
South Marmara ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီသည်ဝန်ထမ်းများကိုခန့်ထားလိမ့်မည်
TÜVASAŞ 20 စဉ်ဆက်မပြတ်စုဆောင်းမှုခံတွင်းစာမေးပွဲကြေငြာချက်
ERÜနှင့် Erciyes Aşတို့အကြားထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်အလုပ်ရှာဖွေရေးစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
စီမံကိန်းအသေးစိတ်ကို Mersin Metro Promotion အစည်းအဝေးတွင်မျှဝေခဲ့သည်
အမျိုးသမီးများအတွက်မြေအောက်ရထားမက်ထရိုကိုစီးသောအမျိုးသားများအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀ တ်စုံ
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနအောက်ပါ Ankara Sivas YHT စီမံကိန်း
ပြည်တွင်းကားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ပြည်တွင်းမော်တော်ကားသည် BUTEKOM နှင့်အတူဂီယာကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်
TCDD ၀ န်ထမ်းများအတွက်သတင်းကောင်း! အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဒင်္ဂါးများကိုငွေစာရင်းထဲသို့အပ်နှံထားပါသည်
TCDD ရောင်းချခဲ့သည်စွပ်စွဲချက်တွေပြန်ဖြေတယ်! ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြTheနာမဟုတ်ပါဘူး
Renault ကုန်တင်ယာဉ်များသည်တစ်နှစ်တာ၏ပထမဆုံးအဓိကပို့ဆောင်မှုကို Netlog ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသို့ပို့ဆောင်သည်